Macmacaanka Yahuuda ee Zoodle Kugel Gluten-free
Khudaarta Cunnada Cuntada yurubta bari Nadiifinta Cuntada Hanuuninta Xayawaanka
Noodhada caanaha ee Yuhuuddu waa mid aad u wanaagsan, waxaana lagu samayn karaa siyaabo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan macaan iyo macaan. Laakiin noodle-yar? Haa, leh zoodle ama nucleini.
Tan iyo markii ay isku dayeen in ay ku dhaartaan noodles (si aad u adag Slav in ay sameeyaan!), Waxaan isha ku hayaa mashiinnada mashiinka mashiinka ah si ay u sameeyaan noodhadh. Waa hagaag, xayiraadaha spiralizer ee KitchenAid wuxuu u shaqeeyaa sida champ oo waxaan si farxad leh u cunaa "noodles" mar kale!
Qoraalkan Zoodle kugel wuxuu ku fiican yahay Kormarista, iyo, haddii la isticmaalo maadada "gluten-free matzo", waxaa haboon dadka leh qamadida.
5 zucchini dhexdhexaad ah (oo aan la xidhin, dhamaato)
1 ilaa 2 qaado oo saliid saytuun ah
4 ukumo waaweyn (heerkulka qolka)
2 qaado shinbir ah (liin, cusub)
1 toon qashin (dufan)
1 koob basal (jar jartey)
Ikhtiyaari: 1 qaado oo basil ah (la jarjarey)
Ikhtiyaari: 1 qaado miro yar yar (la jarjarey)
1 1/2 qaado shaaha
2 qaado oo ah basbaaska madow
1/2 koob oo macaan ah (caadi ama gluten-free)
2 illaa 3 hargab weyn oo miraar ah (gluten-free, la jarribo si loo sameeyo 1 koob)
1 qaado qaado dhir (jarjaran)
Isticmaal farsamoyaqaan ku dheji xayawaanka "noodle" oo dhaadheer, ka samee boodhadh dheer oo ka mid ah 5 maqaarka aan loo baahneyn iyo lakabiga. Tijaabada khudradda waxaa loo isticmaali karaa halkii aad ka heli lahayd, laakiin waxaad heli doontaa baqshiinka caamka ah, ma aha noodles.
Heat 1 ilaa 2 qaado oo saliid saytuun ah oo leh saliid weyn oo kuleyl ah oo dhexdhexaad ah. Sauté zucchini noodle oo leh dalladaha ilaa 3 illaa 4 daqiiqo midba midka kale ilaa jilicsan. Ku dar qanjaruufo oo cusbo ah iyo basbaas leh qiyaas kasta.
Ku rid zucchini la kariyey ee colander iyo dareeraha dareeraha xad-dhaaf ah.
Kuleylka kuleylka ilaa 350 darajo. Si adag u daadi sagxad 9x13-injir ah oo la kariyo buufinta karinta iyo meel foornada si aad u kululaato inta aad diyaarinayso maaddooyinka haray.
4 qaado oo qandhac ah, 2 qaado oo jilicsan oo liin ah, 1 koob oo jarjaran, 1 koob oo basbaas ah, saliid iyo basil (haddii la isticmaalayo), 1 1/2 qaado oo cusbo ah, 2 qaado oo ah basbaas (ama dhadhanka) iyo 1/2 koob oo cunto ah. Ku dar zucchini dillaacsan oo si tartiib ah u walaaq ilaa dhamaystiran.
Ka dib markii saliideedu ay kuleyl ku hayaan 5 ilaa 10 daqiiqadood, ku dar isku dar ah jucchini si aad uhesho. Isticmaal qalabka wax lagu dubo ama dhabarka xajmiga kore.
Ka samee dufanka adoo isku dardaraya 1 koob oo ah finan matoosh ah oo la jarjaray oo leh 1 qaado oo la jarjaray. Dharbaaxo culus oo culus oo culus. Haddii loo baahdo, isku darka kareemayaasha matzo oo leh 2 qaado oo la dhalaaliyay margarine ka dibna kala firdhaan.
Dubo 45 illaa 55 daqiiqo ama ilaa geesaha ay yihiin qoyaan iyo kugel waxaa la dejiyaa bartamaha dhexe. Haddii sarreenku uu aad u dhaqdhaqaaqayo, ku dabool daboolka daboolka. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka daadiso dareeraha xad-dhaafka ah oo dibna geli foornada 5 ilaa 10 daqiiqo dheeraad ah.
Marka walwalka lageliyo, ka saar foornada oo u ogolow in aad qaboojiso ugu yaraan 20 daqiiqo kahor goynta. U adeegso heerkulka qolka ama diirran.
Waxaa laga soo xigtey soo-saare ka socda MyJewishLearning.com.
In badan oo ku saabsan Kugels
Birgel waa bakeeri la dubay oo la sameeyay ukun ukun ama baradho, iyo xayiraadda ukunta, caanaha ama kareemka, farmaajada curdun ama kareemka, labeen dhanaan iyo dhir udgoon. Waxay noqon kartaa mid macaan, taas oo ah sonkorta, sabiibta, iyo qoraaga inta badan lagu daro saldhigga xabsiga, ama dufan marka hilibka iyo khudaarta lagu daro.
Waxaa loo adeegaa sidii macmacaan, saxan dhinaca ah ama koorso muhiim ah. Inkasta oo guud ahaan loo tixgeliyo sirta Yuhuudda ee Ashkenazi ayaa si gaar ah loogu adeegay Shabbat iyo Yom Tov, waxaa jira Polish , Lithuanian , iyo noocyada kale ee Central iyo Eastern Europe ee kugel.
Cunto aan caadi aheyn hilibka Frito - Cunto
Cunto Hilibka Eggplant iyo Caanaha Basil ee Khudradda Cunto-qabta
Baska Easter-ka caadiga ah ee loogu talagalay Barakac
Honey Glazed Baby Carrots (Dhar ama Caano)
Raw Vegan Fikrado Macalimiin Waalidiin ah
Cunto khudradeed Pumpkin Lasagna
Avocado iyo farmaajo empanadas khudradeed
Dareem fudud oo la kariyey oo leh Lemon iyo Rosemary
Cunto Khudradda Cagaaran ah
Noocyada Sagaalka Qabow ee macaan
Gilroy Garlic Dufanka Doomaha
Quince Spoon Sweet Preserves Recipe
Cammirka, Jelliyada & Ilaalinta
Mango Taariikhda: Talooyinka iyo Reefaha
Tamaandho Beerre Blanc Barqadhka
Xirmo Cagaar ah oo la dubay
Talooyin Dheeraad ah oo Dheecaan ah oo loogu talagalay Cuntada
5 Si Xushmo leh Cunnooyinka Cunniga leh ee Ku Haboon Kidos
Cuntooyinka fudud ee carruurta